स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: स्वाइन फ्लु/Swine Flu देखियो: खतराको घन्टी?
स्वाइन फ्लु/Swine Flu देखियो: खतराको घन्टी?
'स्वाइन फ्लु देखियो।' आज(२०६९/०६/१७ )को कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठको समाचार। यो खबरले धेरैलाई त्रसित बनाएको हुनसक्छ। यहाँ यसको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरेकोछु।
के हो स्वाइन फ्लु/Swine Flu?
यो एक प्रकारको भाइरसले गराउने रुघा अर्थात फ्लु नै हो। तर यो अलि जटिल र खतरनाक हुनसक्छ। यो गराउने भाइरसलाई एच१एन१/H1N1 भाइरस भनिन्छ, यो इन्फ्लुइन्जा भाइरसको एउटा जाति हो। यसका धेरै प्रकारहरु हुन्छन्, जस्तो बर्ड फ्लु भाइरस एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो।
यसका बारेमा जान्न किन जरुरी छ?
तपाईंहरुलाई याद होला सन् २००९मा संसारका थुप्रै मुलुकहरुमा एकैपटक स्वाइन फ्लुका विरामी देखिएका थिए। मेक्सिकोबाट शुरु भएको त्यो संक्रमण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुदैं युरोप र एशियामा पनि देखिएको थियो। २०१०को अगष्टमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको प्यानडेमिक प्रकोप सकिएको घोषणा गरेको थियो। यसको प्रकोपलॆ संसारभर गरेर १८,००० भन्दा धेरैको ज्यान लिएको थियो। त्यतिखेरको प्यानडेमिकमा नेपालमा पनि यो भाइरस देखिएको थियो, जसले करिब ४० जनाको ज्यान लिएको थियो। प्यानडेमिक भन्नाले कुनै पनि रोगको संसारका धेरैजसो ठाँउहरुमा एकैपटक प्रकोप देखिनुलाई बुझाउँछ।
अहिले काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न स्थानका भाइरल ज्वरोका विरामीबाट संकलन गरिएको रगतको नमूनाको परिक्षणमा एच१एन१ इन्फ्लुएन्जा भाइरस देखिएको समाचार आएको छ। यो हामीसबैको स्वास्थ्यको लागि खतरा हुनसक्छ, त्यसैले यसको बारेमा जानीराख्नु राम्रो हुन्छ।
सामान्य रुघाखोकी भाइरल संक्रमणको भन्दा यसका लक्षणहरु खासै फरक हुदैंनन्। ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, जीउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, सिँगान बगिरहने, कमजोर महसुस हुने आदी हुन्छ। साधारणतया ७-१० दिनमा ठिक हुने यो रोग यसपाली दुई हप्तासम्म पनि लम्बिएको अनुभव गरिएको छ। साथै ज्वरो ठिक भएपनि टाउको दुख्ने समस्या रहिरहेको पनि देखिएको छ। कसैकसैलाई पातलो दिसा हुने, बान्ता हुने पनि गर्छ। धेरैजसोमा यसको सामान्य लक्षणहरु मात्र देखिने गर्छ र अन्य रुघाखोकीबाट छुट्याउन नि गाह्रै हुन्छ।
कस्ता ब्यक्तिहरुमा यसको जटिलता देखिने बढि सम्भावना रहन्छ?
१. ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुमा, खासगरी २ वर्षमुनिकाहरुमा
२. ६५ वर्ष वा त्यो भन्दामाथिका वृद्धवृद्धाहरुमा
३. गर्भवती महिलाहरुमा
४. दम, सिओपीडी, मुटुको रोग, कलेजोको रोग, मृगौलाको रोग जस्ता दिर्घ रोगहरु भएका, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने अवस्थाहरु वा रोग भएका विरामीहरुमा
कस्ता लक्षणहरु देखिएमा तुरुन्त चिकित्सककहाँ देखाउनुपर्छ?
सामान्य रुघाखोकी लागेको बच्चाहरुमा छिटोछिटो सास फेर्ने, सास फेर्दा गाह्रों भएको जस्तो देखिने, नीलो हुने, खाना, झोलकुराहरु खान नसक्ने, ज्वरो खोकी बढ्दै जाने जस्ता लक्षणहरु देखापरेमा त्यो स्वाइन फ्लुको संक्रमणको जटिलता देखिएको हुनसक्छ।
वयस्कहरुमा सास फेर्न गाह्रों भएमा, छातीपेट दुखेमा, लगातार वान्ता भइराखेमा, चक्कर लाग्ने, होस कम हुने भएमा, साधारण रुघा ठिक भएर पछि फेरी ज्वरो र खोकी झन साह्रों भएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
यो रोग कसरी सर्छ?
श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्ने गर्छ। विरामीले साधारण स्वास फेर्दा, हाँछ्यु गर्दा, खोक्दा यसका भाइरस बाहिर वातावरणमा आउँछ र अन्य स्वस्थ मानिसलाई संक्रमण गर्छ। यसको नाम स्वाइन(सुँगुर)फ्लु भएपनि यो बँगुरसुँगुरको मासु खाएर भने सर्दैन। यो भाइरसको जीन/gene (वंशानुगत गुणका लागि प्रयोग हुने आरएनए/RNA, प्रोटिनहरु)का भागहरु सुँगुरमा पाइने इन्फ्लुएन्जाको भाइरसकोसँग मिल्ने भएकोले यसलाई स्वाइन फ्लु भनिएको हो।
यो रोग किन यस्तो डरलाग्दो तरिकाले फैलिएको होला?
यसका लागि इन्फ्लुएन्जा भाइरसको बारेमा केही जान्नुपर्ने हुन्छ। हरेक जीवमा जस्तै यो भाइरसमा पनि वंशानुगत गुण बोक्ने जीनहरुमा केही फेरबदल भैरहन्छ, तर यसको आरएनएको संरचना र विशेष गुणका कारणले यसमा छिटो र ठुलो फेरबदल/Antigenic shift-drift हुनसक्छ। जसबाट नयाँ बन्ने भाइरस पुरानोभन्दा फरक र विल्कुलै नयाँ प्रकृतिको बन्ने गर्छ। हामी मानिसहरुको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले त्यस्तो बिल्कुलै नयाँ भाइरसको लागि प्रतिरोधात्मक शक्ति बनाएकै हुदैंन, त्यसैले शुरुमा यो सजिलै र भयानक रुपमा फैलने गर्छ। एक पटक रुघा/इन्फ्लुएन्जा लागिसकेपछि त्यसका लागि प्रतिरोधात्मक शक्ति बनेपनि हरेक पटक नयाँ खालको भाइरस बन्ने भएकाले हरेक वर्ष यसको संक्रमण भैरहने हो। तर कहिलेकाहीं सन् १९१८को स्पेनिस फ्लु, १९५६को एशियन फ्लु, २००६-७को बर्ड फ्लु आदी बाहेक अन्य बेला सामान्य संक्रमण मात्र देखिने गर्छ।
यो भएपछि के गर्न सकिन्छ?
यो एउटा भाइरल संक्रमण भएकोले र साधारणतया सामान्य संक्रमण नै हुने भएकोले धेरैमा आँफै कम भएर जान्छ। र सबैको लागि अस्पताल गैहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनकी अस्पतालको वातावरणमा तपाईंलाई अरु विरामीको संक्रमण सर्नसक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। यस्तो बेलामा-
आराम गर्ने प्रशस्त पानी र अन्य झोल कुराहरु पिउने।
अरु मान्छेहरुलाई नसरोस् भनेर नजिकको सम्पर्कबाट अलि टाढा बस्ने।
ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, टाउको दुख्नेको लागि सिटामोल, आइबुप्रोफेन(फ्लेक्सन) खाने।
हाछँयु गर्दा, खोक्दा नाकमुख रुमालले राम्ररी छोपेर मात्र गर्ने, थुकखकार जथाभावी नफाल्ने। मास्क लगाएर बस्ने, नाकमुख सफा गरेपछि हात राम्रोसँग धुने।
लक्षणहरु बढ्दै गएमा वा विरामी बच्चा, वृद्ध, गर्भवती भएमा चिकित्सकलाई भेटेर सल्लाह लिने।
धेरैजसो संक्रमणमा साधारण रुघाको जस्तो लक्षणहरु मात्र देखिएर यो रोग सन्चो हुने गर्छ। माथि भनिएका अवस्थाहरुमा कसैकसैमा यसका जटिलताहरु देखिएर ज्याने जान पनि सक्छ। यो भाइरल संक्रमण भएको एन्टिबायटिकले ठिक गर्दैन तर पछि थपिएर भएको ब्याक्टेरियल संक्रमणका लागि एन्टिवायटिकले फाइदा दिनसक्छ। यसको लागि एन्टिभाइरल ओसेल्टामीभिर/Oseltamivir औषधी प्रयोग गरिन्छ तर सामान्य संक्रमणको लागि यसको आवश्यकता पर्दैन।
यसबाट बच्नको लागि भ्याक्सीन पनि उपलब्द छ। तर यसको औषधी र भ्याक्सीन सर्वसुलभ र सस्तो भने छैन।
विरामीको हेरचाह गर्दा केके कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
विरामीसँग सीधा मुखमुख हुने गरेर कुरा गर्ने गर्नुहुदैंन। विरामीको हेरचाह गरिसकेपछि, विरामीको लुगा, रुमाल आदी छोएपछि तुरुन्तै साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। विरामीलाई सकिन्छ भने छुट्टै कोठा दिनुपर्छ, जसले गर्दा परिवारका अरु स्वस्थ सदस्यहरुलाई रोग सर्ने डर कम हुन्छ। हेरचाह गर्ने ब्यक्तिले पनि मास्क लगाएर हेरचाह गर्ने गर्नुपर्छ। अरु मान्छेको विरामीसँगको भेट सकेसम्म कम गर्नुपर्छ।
यो रोग भयानक रुपमा फैलनसक्ने भएकोले सम्बन्धित निकायको साथसाथै आमजनस्तरबाट पनि यसबाट सुरक्षित रहने उपायहरु अपनाउनु र अरुलाई जानकारी गराउनु जरुरी हुन आउँछ।
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 12:45 AM
Labels: H1N1, Influenza, kantipur, Nepal, pandemic, Swine flu
Kedar Adhikari October 4, 2012 at 1:29 AM
Thank you Very much Samir ji aafnai national language ma about healthy information garaunubhaekoma ajhai siteko uttar pragatiko kamana garda6u good night and hamra visitor friends ko lagi tips for computer One more Visit garnuhos.
Dr. Samir Lama, MDGP Resident October 4, 2012 at 5:27 PM
Thank you Kedarji.
Kanchan October 4, 2012 at 9:49 AM
Informative read..Thank You Doctor Saab :-)
Dr. Samir Lama, MDGP Resident October 4, 2012 at 5:32 PM
Thank U Kanchanji. :)
युवावस्थामा हृदयघात(Heart attack in Youngs) बढेकै ...
मानसिक रोग (लक्षण, प्रकार तथा उपचार) - १